Uyenza njani iividiyo zemihla yokuzalwa kunye nepati 🥇 I-Emulator.online ▷ 🥇
Ukwenza iividiyo zemihla yokuzalwa kunye namaqela osapho kuhlala kumnandi kwaye kuzisa abathathi-nxaxheba ngakumbi, njengoko kuya kuhlala kunokwenzeka ukukhumbula ezo nkumbulo ngokuqala ividiyo, mhlawumbi iminyaka embalwa emva komsitho okanye emva kwexesha elithile. Ngelishwa, ayingabo bonke abasebenzisi abayaziyo indlela yokuhamba kwaye luhlobo luni lwenkqubo okanye usetyenziso olwenziweyo ukwenza iividiyo zokuzalwa kunye nezepati- izixhobo zokuhlela ividiyo zakudala kunokuba nzima kakhulu ukuzisebenzisa, kunye nokubiza.
Ukuhlangabezana neemfuno zawo wonke umntu kwesi sikhokelo, siye saqulunqa ezona zicelo zingcono, ezona nkqubo zilungileyo kunye nezona ndawo zintle kwi-intanethi ukwenza iividiyo zemihla yokuzalwa kunye nepati, Ukubonelela ngezixhobo zasimahla ezilula ukuba basebenzise abasebenzisi be-novice, kwaye ngandlela thile ziyonwabisa.
OKUFUNDILEYO FUNDA: Ungayibamba njani iqela lokusasaza ividiyo
Yenza usuku lokuzalwa okanye iividiyo zepati
Kwizahluko ezilandelayo siza kufumana uthotho lwezixhobo zokwenza usuku lwakho lokuzalwa okanye ividiyo yeqela ukusuka kwiividiyo ezirekhodwe nge-smartphone okanye kwikhamera yevidiyo yedijithali (kwabo banayo). Kuba ukuhlelwa kwevidiyo kunokwenziwa nakweliphi na iqonga, siza kukubonisa iinkqubo zePC, ii-smartphone kunye nokusetyenziswa kwethebhulethi, kunye nakwiindawo ezikwi-Intanethi, ukuze wenze ividiyo yokuzalwa ngokuvula nje isikhangeli.
Iinkqubo zokwenza iividiyo zokuzalwa
Inkqubo esinokuyisebenzisa kwiWindows ukwenza usuku lokuzalwa kunye neevidiyo zepati yile Umhleli wevidiyo ka-EaseUS, Ukhuphelo simahla kwiwebhusayithi esemthethweni.
Ngale nkqubo sinokwenza iividiyo zoyilo sisebenzisa ukukhetha okuhle kweefilitha, iziphumo kunye nabancedisi ukwenza iividiyo, ngaphandle kokuba ziingcali. Inkqubo inikezelwa simahla kuhlobo lovavanyo, kodwa yonke imisebenzi ifumaneka kwangoko ukuze isetyenziswe: enyanisweni, kuphela umda wale nkqubo bubukho bewatchermarket echaza inkqubo kunye nomda wokuthumela ngaphandle. yeevidiyo ezenziwe (ubuninzi be-720p), zigqithiswe ngokulula ngokuthenga umrhumo.
Enye inkqubo eluncedo kakhulu yokwenza iividiyo zamaqela kunye nemihla yokuzalwa yile I-Wondershare Filmora, ukhuphele simahla kwiWindows nakwiMac kwiwebhusayithi esemthethweni.
Ngale nkqubo sinokwenza iividiyo ezintle kakhulu ngonqakrazo olumbalwa lwempuku: kwiimeko ezininzi kuyakwanela ukurhuqa ifayile yevidiyo ukuze uyihlele kujongano lwenkqubo kwaye ukhethe enye yeziphumo ezikhoyo okanye utshintsho, ukuze ukwazi ukwenza kuphela ividiyo yohlobo lwayo. Inkqubo yasimahla inayo yonke imisebenzi eyimfuneko yokwenza ividiyo yethu kodwa kwinqanaba lokuthumela kwelinye ilizwe iya kongeza i-watermark yokuchonga: ukuba sifuna ukuyisusa, thenga nje ilayisensi yokusebenzisa intengiso.
Ukufumana ezinye iinkqubo eziluncedo zokuhlela xa usenza usuku lokuzalwa kunye neevidiyo zepati, sicebisa ukuba ufunde isikhokelo sethu Yenza ividiyo yevidiyo, umculo, iziphumo ezifana nesilayidi somfanekiso.
Isicelo sokwenza iividiyo zokuzalwa
Ngaba sifuna ukwenza usuku lokuzalwa kunye nevidiyo yeqela ngokuthe ngqo kwi-smartphone okanye ithebhulethi yethu, ngaphandle kokuhambisa umxholo ukuze uyihlele kwi-PC? Kule meko, sicebisa ukuba uvavanye isicelo kwangoko. UQuik, ifumaneka simahla kwi-Android kunye ne-iPhone / i-iPad.
Igama eligqithisiweyo kunye nesi sicelo sisantya, enyanisweni kuya kwanela ukukhetha ividiyo oza kuyihlela kwaye ukhethe enye yeendlela ezininzi zokuhlela ezikhoyo ukwenza ividiyo esemgangathweni. Isicelo sikwakuvumela ukuba uvumelanise ividiyo kunye nawo nawuphi na umculo, unciphise iinxalenye zevidiyo, kwaye ungeze abalinganiswa okanye izihloko. Isicelo simahla, akukho mfuneko yokuba uhlawule nayiphi na intlawulo okanye imisebenzi eyongezelelweyo.
Esinye isicelo esigqibeleleyo sokwenza usuku lokuzalwa kunye neevidiyo zepati Magisto, ifumaneka simahla kwi-Android kunye ne-iPhone / i-iPad.
Ngalesi sicelo unokwenza iividiyo ezintle nezihlekisayo kwimizuzu embalwa, khetha ividiyo yokuqala, ukhethe enye yeendlela zokuhlela ezilungele ukusetyenziswa (kukwakho nesimbo semihla yokuzalwa kunye neeholide ngokubanzi), yongeza izitikha kunye neziphumo kwaye ekugqibeleni Thumela ividiyo entsha, ukuze wabelane ngayo kwinethiwekhi yoluntu okanye usetyenziso lwemiyalezo. Isicelo asikhululekanga kodwa sinemisebenzi ethile ehlawulelweyo, ethi nakanjani ichaphazele ukusebenziseka.
Ukuba sifuna ukuzama ezinye iinkqubo zokuhlela ividiyo, sicebisa ukuba ufunde inqaku lethu. Ezona zilungileyo zomsebenzi wesilayidi ze-Android kunye ne-iPhone.
Iindawo ezikwi-Intanethi zokwenza iividiyo zokuzalwa
Ngaba asifuni ukusebenzisa iinkqubo kunye nokusetyenziswa ukwenza usuku lokuzalwa okanye ividiyo yeqela? Kule meko, vula nje nasiphi na isikhangeli sewebhu (kubandakanya uGoogle Chrome) kwaye uvule uKapwing, umhleli wevidiyo okhoyo kwi-Intanethi.
Indawo isebenza ngaphandle kobhaliso kwaye inika zonke izixhobo eziyimfuneko ukwenza ividiyo oyifunayo. Ukuyisebenzisa, cinezela iqhosha Cofa ukulayisha ukulayisha ividiyo ukulungiselela ukuhlela kwaye usebenzise izixhobo ezingaphezulu kwefestile ukongeza isicatshulwa, ukongeza imifanekiso okanye ingoma yomsindo; Ekupheleni komsebenzi sicinezela enkulu ebomvu Rhweba ngaphandle iqhosha kwiqhosha eliphezulu ekunene ukukhuphela ividiyo entsha, ukuze ibe nokwabelana okanye igcinwe kwimemori yesixhobo.
Enye indawo enomdla kakhulu yokudala iividiyo zemihla yokuzalwa kunye nepati kwi-Intanethi yiClipchamp, ethelekisa indawo yangaphambili inikezela ngeendlela ezininzi ngaphandle kwebhokisi.
Nje ukuba ubhalise mahala simahla kule ndawo (sinokusebenzisa iakhawunti kaGoogle okanye kaFacebook ukufikelela kwangoko kuzo zonke izinto), sifaka ividiyo ukuhlela kwaye sikhethe enye yeetemplate zevidiyo ezikhoyo, ukugcina ixesha elininzi. Ekugqibeleni cinezela nje Ukuthumela ngaphandle Ekunene phezulu ukukhuphela okanye wabelane ngevidiyo.
Ukuba sifuna ukusebenzisa ezinye iisayithi zokuhlela ividiyo kwi-intanethi sinokuqhubeka nokufunda kwisikhokelo sethu I-montage yevidiyo ekwi-Intanethi kunye neendawo zokuhlela ividiyo ezinokuxutyushwa kunye neziphumo ezizodwa.
Ukwenza ividiyo yomhla wokuzalwa okanye ipati yosapho, akukho mfuneko yokuba sibe ngabalawuli: sisebenzisa izixhobo ezichazwe apha ngasentla sinakho Thatha ithuba ngeetemplate esele zenziwe okanye izitayile, ukuze uyilayishe ividiyo kwaye uyonyuse ngokubonakalayo ngonqakrazo nje oluncinci okanye iimpompo. Ukuba singabathandi bokuhlelwa kwevidiyo, zonke iisayithi, usetyenziso kunye neenkqubo ezibonisiweyo zisivumela ukuba senze ngesandla, ukuze sivelise ubuchule bethu.
Ukwenza iividiyo ezihlekisayo nezithandekayo ekwabelwana ngazo kwinethiwekhi yoluntu, sicebisa ukuba ufunde nezikhokelo zethu Isicelo sokwenza amabali kwiifoto kunye nevidiyo zomculo (i-Android-i-iPhone) mi Yenza iiLooming zeBoomerang iiVidiyo kunye noHlelo (usetyenziso lweWindows kwi- Ivenkile yeWindows.